ကာရန်မဲ့ အတွေးစများ: FeedBurner ဆိုတာ
ရေးပြီးချိန်: 2/16/2009 09:46:00 PM
"အီး၊ အဲ၊ အင်း" :D Great stories. Thank you.
သြော် ဒါကြောင့်ကိုး အမြဲရောက်နေလို့ စိတ်ညစ်နေတား)
ကို Zatlite... ဘာကို thanks မှန်း မသိပေမဲ့ ကျွန်မကလည်း Thank you...
မနော်... ဟီးးး။ :P
ကိုလူလ... တကယ်ကြီးလား။ =)) နောက်ဆို စာသေချာဖတ်... အီးမေးလ်လိပ်စာတွေ၊ password တွေ အခိုးခံရလိမ့်မယ်။ LOL
its diskette, not disc card.
ဟီဟီ... ကျေးဇူး။ ဘားဂလစ်ခ်ျလို ရေးတာ များသွားပြီ။ ;))
အမလိုပဲ ၊ အမလဲ သူများတွေ friendster account ကို update လုပ်သမျှ အမကို email ကနေ auto generate နဲ့ အမြဲ update ပို့နေတာကို တောင် မသိပဲ အဲဒီ email ကို reply လုပ်ပြီး ရန်တွေ့ဖူးတယ်။ ဟဲဟဲ အဲဒါ အရင်တုံးကပါ၊ အခု ဟုတ်တော့ဘူးနော်၊
တဟားဟား တဝါးဝါး ရီသွားတယ်။ ကျနော် မရီရတာ ကြာပြီဗျ ။ကျနော် မအူ လို့ မဟုတ်ဘူးနော် အဖော်တွေ အများကြီး ရှိပါလားဆိုပြီး အားတက်သရော ရီသွားတာပါ ။ရသမြောက်အောင် ရေးနိုင်လို့ ချီးကျူးပါတယ် ။